Shiinaha Shiinaha warshad jumlo Super 2.0 Channel Tiyaatarka Guriga BT5.0 3D Hifi Bass Sound TV Soundbar (SP-614) Soo-saar iyo Warshad | Eyin
Warshadda Shiinaha jumlo Super 2.0 Channel Tiyaatarka Guriga BT5.0 3D Hifi Bass Sound TV Soundbar (SP-614)
Awood siinta: DC, 18V / 2A
Qaybta Darawalka: 2.25 ″ x4
Cabbirka Badeecada: W860 × D70 × H70MM
Qaybta Darawalka: 2.25 ″ x4 + 5.5 Power Awoodda Wax Soo Saarka: 80W
Soocelinta Joogtada: 30Hz-20KHz
Cabbirka Soundbar: W860x70x70MM
Subowoofer Cabirka: W265x210x230MM
• KHIBRAD SHAQAALAHA GURIGA AH - OO LAGU SAMEEYEY - Iyadoo la casriyeeyay 34 inji oo dherer ah, oo ka hooseeya 2.5 inji dherer ah, naqshad madow oo dhammaystiran oo madoow ah, baarka dhawaaqa TV-ga ayaa ku siinaya khibradaada shineemo ee guriga. Laba darawal oo dhexdhexaad ah oo 6-inji ah, 1-inji tweeter, iyo tikniyoolajiyad gaar ah oo loo yaqaan 'Power Bass' ayaa gacan ka geysta isdabajoogga aadka u hooseeya iyo 110dB ee codka cad Waxaa sidoo kale loo farsameeyay laba dhinac oo isku dhejisan bass reflex, oo leh baasas qoto dheer iyo awood dheeri ah. Dhageyso codka, dareemo faraqa!
• BLUETOOTH 5.0 & DSP GUDBINTA UGU XASILSAN - Baarkayaga dhawaq ee ugu dambeeyay wuxuu qaataa tiknoolajiyada Bluetooth 5.0 & DSP si loo hubiyo xawaaraha gudbinta ugu dhakhsaha badan, iyo isku xirnaanta xasilloon illaa 50 ft oo leh adeeg hooseeya. Qalabka cusub ee Bluetooth 5.0, waxaad ku ciyaari kartaa muusikada aad jeceshahay meel kasta. Si aan uga dhigno mid aad ugu habboon, waxaan ku darnay batoon Bluetooth ah oo ku jira jirka baarka dhawaaqa kaas oo kuu oggolaanaya inaad qalabkaaga si fudud ugu lammaaneyso
• KU DIIWAANGELI DIIWAANGALO MAGAALADA CODKA KALA DUWAN - Muusigga, Filimka, Qaabka caadiga ah ee isku hagaajinta adoo isticmaalaya qalabka fog. Qaabka Filimka, u rogo filim caadi ah waayo-aragnimada masraxa guriga ee aan caadiga ahayn. Kudar cad oo dheeri ah oo luuq leh ku dar liiskaaga muusiga. Hababka caadiga ah, injineerada Eyin si ay u xoojiyaan dhawaqa codka aadanaha si aad had iyo jeer ula socon karto sheekada. Muga dheeriga ah iyo awoodda ayaa si habboon ugu yaal dhinaca baarka dhawaaqa.
• XIDHIIDHADA FARSAMADA FUDUD EE SET LAGU SOO GELIYO - Qalabkayaga TV-ga ee 2.0 wuxuu taageeraa xulasho badan oo fiilooyin leh oo ay ku jiraan HDMI ARC, Optical, AUX input, iyo USB oo la jaan qaadaya TV-ga, borojektar, kumbuyuutar, Blu-ray player, kiniin, XBOX, PS4, Kordhiye, iyo dheeraad ah. Si fudud u hubso in codkaaga TV-ga aad dejineyso PCM-ka qaab muuqaal ah kahor isticmaalka. Hadda, xadhig 5 premium fiilo indhaha ah iyo 5 ft RCA fiilo ayaa ku jira xirmada.
• WALL DUUL & MAALGALKAAGU WAA LOO BANNAAN YAHAY - Naqshadda aadka u khafiifka ah ee baarka dhawaaqa ayaa si raaxo leh ugu habboon TV kasta oo cabbir ah ama si fudud ayaa loogu dhejin karaa gidaarka iyada oo ay ku jiraan qafiska sii kordhaya. GARGAAR KU SAABSAN NOLOSHA Baarka dhawaaqa ee 'Eyin kasta' wuxuu mari doonaa hanaan tijaabo oo tayo leh ka hor inta uusan dirin.
Hore: 2021 Bar Cusub oo Cusub oo Lagu Dhex Dhex-dhisay Subwoofers, Bluetooth, iyo Xakamaynta Codka Alexa oo La Dhisay (SP-620E (S100))
2020 Hot iibinta dhawaaqa TV-ga oo leh Qaybaha Wareegtada ...
2.1 Tiyaatarka Guriga ee '3D 3D' Sitooo Soundbar ...
Shiinaha qeybiyeyaasha alwaax ku hadla soundbar guriga th ...
Tv Iyo Soundbar Mount, Wifi Soundbar Wixii Tv, Karaoke Soundbar, Hadalka Wifi Soundbar, Alexa Soundbar, Tv Soundbars,